トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka amin'ny zorony mikendry isan-karazany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia manana mihamaro ny pachinko parlors mba hametraka isan-karazany amin'ny zorony. Raha ny mahazatra, efa nanorina mifanolotra vondrona vitsivitsy ny modely mitovy, ao amin'ny Variety zorony, koa dia efa nanangana modely hafa tanteraka fepetra arahana tsirairay. Indray mandeha isan-malaza nisy modely, ampy ny dimy nataony ho nametraka ihany koa ny enina, noho ny antony toy ny malaza tsy misy fandidiana dia tsy hifikitra, modely izay tsy manome anao safidy afa-tsy ny hanala, ho an'ny mpanjifa izay te-hilalao Na izany aza, na navela handao vitsivitsy monja venty, dia manana isan-karazany zorony na nahazo nilalao nostalgic mba hampidirana ny latabatra nampiasaina. Ao
, toy izany isan-karazany amin'ny zorony, dia ny tombontsoa sy ny fatiantoka izay mikendry, dia mijery izay zavatra.
Voalohany indrindra, dia soa, nefa tsy fantatro tsara ny safidy sy ny pachinko hevitra isan-karazany ny modely, satria ny zorony dia milalao maro, dia mora ny hyenas. Ankoatra izany, dia mitady ho mamy fantsika fanitsiana, dia ho mahagaga hilalao.
zorony Isan-karazany, mandra-avo-spec milina avy Dejihane, dia misy isan-karazany ny modely fepetra arahana. Taloha, fa efa napetraka Dejihane maro, dia manana ihany koa ny fitomboana mendrika avo-spec milina ankehitriny. Isan-karazany zorony, ka mitady ho mamy fantsika fanitsiana noho ny anankiray modely, ho an'ireo izay namely ny Hanemono milina, izay Hanemono izay efa nametraka tao amin'ny zorony isan-karazany, koa hisy tampoka, na ny tanjona izay mitodika maso tsara.
sy Variety zorony, dia misy ihany koa ny efi-trano izay rookie pachinko fantsika mpanakanto vao manomboka ny fihantonan-javatra fanitsiana dia miandraikitra, noho izany dia mety tsy ampoizina ny harena latabatra Misy nanjavozavo ny zavatra nosoratany noho ny ara-dal?na fanitsiana fantsika mpitsabo mpanampy za-draharaha mamely hihavian'ny fihantonan-javatra, mbola ny olona izay mandeha ao Hanemono afovoany dia ny tanjona maso.
Ankoatra izany, ireo izay milalao amin'ny zorony isan-karazany, ny ananantsika zavatra maro be loatra ny olona tsy mahalala ny pachinko. Ao amin'ny
vao tsy ela akory, dia toy izany, na manana asa sarotra toy ny latency mety fiovaovana, ianao, na dia nijanona tsy misy filazana izany hita ao niafina. Dia tena azo inoana fa toy izany no anaovan'ireo latabatra Avo ny hoe, ianao isan-karazany amin'ny zorony.
ary, araka ny fatiantoka, mahatratra sy fampisehoana tsirairay modely izany, ary tsy maintsy ho nahatsiaro izany dia eny amin'ny rehetra samy hafa, ka Dejihane misy maro, izany dia ny hoe misy tsy be specs ny modely izay mety ho lalao. Ao amin'ny zorony Isan-karazany, mahaleotena sy modely no nametraka tao tsirairay. Noho izany, samy hafa rehetra mamokatra.
izay tonga dia, na ny ambony takatry ny azo itokisana, tsy maintsy mahatsiaro na ny fanatanterahana ny, dia tsy mahalala na dia nijanona tamin 'ny fotoana ihany koa ny mbola. Raha tsy fantatrao mihitsy, na dia tao an-mijoro tsara izay mivily na dia fantsika fanitsiana, Horukon tsara napetraka, na dia tsapako ny onjam-ROM dia toa tsara, dia malahelo ny lalao peo.
Ary niteny ny samihafa, maro pachinko parlors ho hilalao ny no tena tanjona, dia tsy maintsy lasa be fametrahana Dejihane. Raha
Dejihane, ho mamy ary fantsika fanitsiana kely, fa malemy kokoa mipoaka hery ny payout, dia tsy mampatahotra toy ny pachinko trano izy.
famintinana Hanemono, dia ny olona izay Tachimawa 'ny Dejihane Center dia miezaka Variety zorony koa, hitily? Ho any amin'ny famaranana izany. Raha toa, pachinko efi-trano maro izay no tena antony izay milalao, tsy azo ihodivirana fa mitombo isa ny fametrahana ny Dejihane. Raha
famintinana Hanemono, dia ny olona izay Tachimawa 'ny Dejihane Center dia miezaka Variety zorony koa, hitily? Ho any amin'ny famaranana izany.